राजनिती भनेको बिचार हो , आमाको पेटबाट निस्कदै कोही पनि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर निस्कदैन ! पार्टीले बोकेको निती , सिद्धान्त र योजना हेरेर , बुझेर नै कुनै पार्टीको पछी लागिन्छ! आमाले हिडन र बोल्न सिकाईन बाबुले संघर्ष गर्न सिकाए बिदेशी भूमि ले बिकास , समृद्धि र देशभक्ति सिकायो ! अबम आफुले सिकेको ज्ञानको सदुपयोग गरेर देश बनाउन चाहन्छु , म राजनिती गर्न चाहन्छु? मलाई राजनीतिप्रति रुचि छ ।
म चाकडी गर्न जान्दिन गुण्डा पाल्न र पैसालगानी गर्न चाहन्नँ , अब के नेपालमा मेरो राजनितीक भविष्य छ त ? म कसैको गोठालो होईन र हरेक गलत कामको खिलाफ चट्टान बनेर उभिन्छु,बिरोध गर्छु“ । किनकि म एक चेतनशील नेपाली युवा हूँ र देश बनाउने दम राख्छु । आजको आवस्यकता - राजनितीक स्थिरता , बिकास र समृद्धि ! नेपालको राष्ट्रिय एकता मजबुत नभईकन नेपाल बन्दैन । संघीयताले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई खलल पुराउने काम मात्र गरेको छ । त्यसैले हामी सबैले संघीयताको नकरात्मक प्रभावका बारेमा जनता र नेतालाई समेत बुझाउँन खाँचो छ ।
सरकार ढाल्ने र बनाउने यो संसदीय प्रणाली नेपालमा असफल साबित भैसकेको अवस्था छ । त्यसैले अब हामी सबैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला आउको छ । "संघियता र धर्म निरपेक्षता ले नेपालको भलो गर्दैन" ! नेपाल जस्तो सत्ता केन्दित राजनिती हुने देशमा प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएँन भने सरकार आउछन जान्छन ! ढलेको सरकार उठाउन होईन अब फेरी ९-९ महिना ढल्ने सरकार नबनाउन संबिधान संसोधन गरी प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी लेखाउन सडक मा उत्रिउ ! संसद मा बोली रहदा प्रचण्डले केपी ओलीलाई संघियता को विरोधी र परिवर्तन नचाहने व्यक्तिको संज्ञा दिए ! ओली मात्र किन म पनि यो परिवर्तन चाहन्न ! संघियता र धर्म निरपेक्षताले नेपालमा राजनितीक स्थायित्व , शान्ती , बिकास र समृद्धि ल्याउछ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छैन , यो ९-९ महिनामा सरकार ढाल्ने संसदीय प्रणाली ले नेपाल उभो लाग्छ भन्ने कुरामा मलाई पनि बिस्वास लाग्दैन ! किनकी मेरा लागि पार्टी भन्दा ठुलो देश हो ! आजका दिन सम्म आउदा नेपाल संघियता र धर्म निरपेक्षता मा जान सक्दैन र नेपालमा राजनितीक स्थायित्वका लागि प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै चाहिन्छ भने कुरा हामी धेरै नेपालीले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो! नेपाल हाम्रो हो र नेपाल हामीले नै बनाउनुपर्छ । नेपालमा सम्भावना छ र नेपाल बनाउन सकिन्छ ।
तर पैसा कमाउने होईन देश बनाउने भावनाका साथ राजनीतिमा लाग्ने हो भने नेपाल बन्छ । हामी आफैमा विभाजित छौ , हामी जात र धर्मको आधारमा गुटबन्दी / राजनिती गर्छौ । हामीमा गलत को बिरोध गर्ने क्षमता छैन , हामी नेपाली होईन कुनै पार्टीका बफादार कार्यकर्ता हुन रुचाउछौ । मेरो बिचारमा झुटा समाचार लेखेर समाजमा भ्रम फैलाउने र चरित्रहत्या गर्नेहरु लाई कारवाही ! संबिधान संसोधन ; प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी , संघियता , धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक प्रणालीको खारेजी , स्थानीय निर्वाचन ! आफ्नो स्वाभिमान , आत्मसम्मान र स्वाधिनता नगुमाईकन भारत संग सम्बन्ध सुधार र ब्यापार ! चिन संग भएका सन्धी , सम्झौता को कार्यान्वयन ! मधेशबादी र जनजातीका जायज मागको सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एकता मजबुद बनाउने ! बिदेशी लगानी नेपाल भित्राउन उचित वातावरण को सृजना गर्ने , सरल निती नियम र कानुन बनाउने ! बन्द हड्ताल गरेमा सामाजिक अपराध अन्तरर्गत कारवाही गर्ने कानुन ल्याउने अर्थात बन्द हड्ताल गर्न नपाउने कानुन ल्याउने ! पर्यटन , कृषि , उर्जा र शिक्षालाई बिशेष प्राथमिकता मा राख्ने , लगानी बढाउने ! युवालाई देश मै रोजगारी र बाहिर जान खोज्नेलाई सिपमुलक तालिम को व्यवस्था गर्ने ! सुरक्षा निकाय , स्वास्थ्य , शिक्षा र कर्मचारीतन्त्र लाई राजनितीक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने ! कुनै पनि पदमा आरक्षण र राजनितीक नियुक्ति नदिने , खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत सक्षम ब्यक्ति छान्ने सिस्टमको बिकास गर्ने ! मेरो बिचारमा जब सम्म हाम्रो समाजमा यो आरक्षण भन्ने शब्द रहन्छ तब सम्म जातियता , जातीय भेदभाव कायम नै रहन्छ ।
के नेपालका सबै बाहुन , क्षेत्री धनी छन ? के नेपालका सबै दलित , जनजाति , मधेशी गरिब छन ? के नेपालमा सबै बाहुन , क्षेत्रीको शासन सत्तामा पहुच छ ? के नेपालमा दलित , जनजाती , मधेशीको शासन सत्तामा पहुच छैन ? सरकार आरक्षण नै दिने भए जात हेरेर होईन वर्ग हेरेर देउ । सरकार सबै जात जातिलाई समान व्यवहार गर , कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर होईन भने भोली हुने बिद्रोह को हुरी लाई रोक्ने तागत नेपाल सरकार संग हुने छैन ।
यी सबै कुराहरु गर्न सम्भव छ र गर्न सकिन्छ अनि मात्र नेपाल ले १० बर्ष भित्र बिकास र समृद्धि को बाटो समाउन सक्ने छ ! जब देश आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम हुन्छ तब मात्र चुलो चुलोमा ग्यास , चुच्चो रेल , पानी जहाज , पेट्रोलको कुवा , हावाको बिजुली जस्ता कुराहरु भन्न र गर्न सकिन्छ ! राष्ट्रीय एकता बलियो बनाउनु पर्छ अनि बल्ल हामी बिदेशी हस्तक्षेपकाबिरुद्ध लड्न सक्छौ, देशलाई बिकास र समृद्धि को दिशा तर्फ लैजान सक्छौ ! बुरुक्क बुरुक्क ४ हात उफ्रिदै भारत लाई गाली गरेर नेपालको बिकास हुदैन ! भारत र चीनको सहयोग र सदभाव बिना नेपालको बिकास सम्भव छैन , नेपालले भारत र चिन दुवै संग सुमधुर सम्बन्ध कायम राक्दै नेपालको हितलाई केन्द्र मा राखेर दुवै देश बाट फाईदा लिन सक्नु पर्छ ! आजको संसार गाली , गलोज बाट होईन परस्पर सहयोग र सहकार्य बाट मात्र चल्न सक्छ ! जे कुरामा पनि राष्ट्रबाद र स्वाभिमान घुसाउनु कति उचित होला ? आत्मसम्मान र स्वाभिमान सबैलाई प्यारो हुन्छ तर कटु सत्य दुनियाको सामुन्ने हात फैलाउने भिकारी को आत्मसम्मान हुदैन ।
भारत , युरोप , अमेरिका वा अन्य कुनै देशले नेपाललाई हेप्दा मेरो पनि खुन तातेर आउछ तर खुन तातेर मात्र के गर्ने हाम्रो औकात बीच चौराहा मा कचौरा समातेको भिकारी को जस्तो छ ।
कमजोर लाई सबैले हेप्छन तेसैले पहिले देश बनाउ अनि बिश्व थर्काउला । भोको पेट र खाली खल्ती मा स्वाभिमान बाच्दैन , हात फैलाउनेको आत्मसम्मान हुदैन । नेपालमा सम्भावना छ । कृषि , पर्यटन , हाईड्रो उर्जा , खनिज , जडिबुटी हरेक कुराले नेपाल भरिपूर्ण छ तर हामीमा देश बनाउन पर्छ भन्ने भावना-उर्जा-अठोट-राष्ट्रिय संकल्प छैन ।
महाकाली , माथिल्लो कर्णाली , बुढी गण्डकी बेच्दा पनि राष्ट्रबादी र अरुले तिमीहरुले छिमेकी संग बिगारेको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन खोज्दा पनि राष्ट्रघाती ? महाकाली , माथिल्लो कर्णाली , बुढी गण्डकी बेच्ने गोरो छाला भएको ब्यक्ति चाही नेपाली हुने तर लाठी बोकेर भारतीय ले बनाएको बाध फुटाल्न जादा रगतै रगत हुने कालो छाला भएका ब्यक्तिहरु चाही भारतीय हुने ? मुखले ठुगेर पोथीलाई अण्डा पार्ने बनाउछु भन्ने कालो भाले र आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्रयाक बनाउछु भन्ने नेकपा एमाले एकै हुन ! १०.५ खर्व को बजेट ल्याउछ तर ४ खर्व को श्रोत नै हुदैन , अर्वौ लाग्ने फास्ट ट्रयाक लाई केहि करोड छुट्टाउछ र राष्ट्रियताको भजन गाएर बिकास मा राजनिती गर्छ ! एमालेमा पनि बिशेष गरेर ओली पक्षका साथिहरुमा आफु बाहेक अरु सबै राष्ट्रघाती , आफु नेपाली बाकी सबै भारतीय र देश बिकास गर्न काम होईन उखान तुक्का बर्बराउनु पर्छ भन्ने मानसिक रोग बिकसित हुदै गएको देखिन्छ ! मैले बुझे सम्म नेपालका कम्निष्ट को कुनै सिद्दान्त हुदैन , उनीहरुको सिद्दान्त नै पैसा र पावर हो ! गरिवका नारा भजाएर झुप्रो बाट राजनिती गर्छन र महलमा पुगे पछी सकिन्छ , गरिव जनता जस्ताको तस्तै तर नेता अरवपती ! देशको आधा भूभागका जनताले ५ रुपयाको सिटामोल नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था छ , भूकम्प पिडीत १ बर्ष देखि तिरपाल मुनि छन , बाढि पिडितको अवस्था उस्तै कष्टकर छ तर नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बेलगाडा चढेर अमेरिका जानु उस्तै हो !
न यहाँ सरकार र नेतृत्व सही नीति बनाउँछ न त युवा राष्ट्र निर्माणका लागि परिचालन हुन नै तयार छन् । हामी सबैको राजनितीक बाटो फरक फरक होला तर सबैको चाहना बिकसित र समृद्ध नेपाल नै हो । जब हामी सबैको चाहना एउटै छ ! आउनुहोस पुर्व मेची देखि पश्चिम माहाकाली सम्मका सबै साथीहरुहातेमालो गरौ र भ्रष्ट नेता अनि तिनीहरुले स्थापित गरेको भ्रष्ट संरचना ध्वस्त पार्दै देश बिकास को चित्र कोरौ ! शहर , गाउ , टोल र घर घरबाट भ्रष्ट्राचार का बिरुद्ध उठो भ्रष्ट्र नेतालाई बहिष्कार गरौ ! देशभरका सबै विकासप्रेमी युवाहरु एकै ठाउमा गोलबद्ध हुन आवस्यक छ !भ्रष्ट्राचारका बिरुद्ध उठ्न जरुरी छ हिमाल , तराई र पहाड नेपाल हो ! हिमाली , पहाडी र मधेशी सबै नेपालीहुन ! राम्राको समर्थन र गलतको बिरोध गरौ , पार्टीको होईन देशको झण्डा छातीमा राखौ अब को १०-१५ बर्ष भित्र नेपाललाई एक बिकसित र समृद्ध राष्ट्र बनाउछ सकिन्छ तर बिकास र समृद्धि लाई केन्द्रमा राखेर सबैले राष्ट्रिय संकल्प गरौ गर्न जरुरी छ । देशमा सम्भावना नै सम्भावना छ ।